Horumaro cusub oo ay gaadheen ciidamada Yemen iyo dagaalyahanada taageera ee ku sugan Al-Bayda - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Horumaro cusub oo ay gaadheen ciidamada Yemen iyo dagaalyahanada taageera ee ku...
Horumaro cusub oo ay gaadheen ciidamada Yemen iyo dagaalyahanada taageera ee ku sugan Al-Bayda
Ciidamada Yemen iyo malayshiyaadka taageersan ayaa kusii siqaya gobolka Al-Bayda, iyagoo la wareegaya fariisimaha milatari ee xoogaga Haadi iyo isbahaysiga Sacuudiga ee degmada Nata’a.
Saacadihii la soo dhaafay, ciidamada iyo malayshiyaadka taageersan ayaa weerar ku qaaday fariisimaha milatari ee xoogaga Abed Rabbo Mansour Hadi iyo isbahaysiga sucuudigu hor kaco degmada Nata, waqooyi bari ee gobolka al-Bayda ee bartamaha Yemen, ilo wareedyo ayaa sidaa sheegay.
Wararka ayaa intaa ku daraya in ciidanka iyo malayshiyaadka taageersan ay la wareegeen fariisimo militari oo waaweyn oo ay lahaayeen ku lahaayeen ee agaasinka iyo isku xidhka hawlgalada halkaa oo isku dhacyo ka dhaceen meel u dhow degmada Noman.
Dagaalku sidoo kale wuxuu ka socdaa jihooyinka Jirabbat iyo Shuhura ee jihada Behan ee Shabwa, koonfur bari Yemen, halkaas oo Hadi iyo ciidamada isbahaysiga lagu laayey laguna dhaawacay intii uu socday dagaalka.
Warbaahinta militariga Yemen ayaa daabacday muuqaalo cusub oo ku saabsan guusha Howlgalka ee ciidamada qalabka sida ee Yemen ay xaqiijiyeen dib ula wareega aagagga degmooyinka Silo iyo Zaher ee bariga iyo koonfurta Al-Bayda.
Ciidamadeenna qalabka sida dhowr guulood ayey ka gaadheen dhulka dagaalku ka socdo wakhtigii tegay, cadowga waxaa la soo gaadhsiiyey khasaaro badan, ”ayuu yiri Jeneraal Yaxya Saciid, afhayeenka ciidamada qalabka sida ee Yemen, mar uu la hadlayey saxaafada.
Xaaladdo kale oo a la xiriira dagaalka, ayaa tilmaamaya ilo laga helay Qolka Howlgallada Saraakiisha Xiriirka ee Xukuumadda Sanca, waxayna weriyeen in ay la socodaan 166 xadgudub oo xoogagga isbahaysiga ee Hodeidah 24kii saac ee la soo dhaafay ay gaysteen.
Previous articleDambiyo basaasnimo oo ay wada galeen Sacuudiga iyo Imaaraatku. Maxay tahay ujeedada kuwa ku lugta leh iyo bartilmaameedoodu?
Next articleMagacyo cusub oo ku jira liiska basaasnimo ee pegasus. Yey yihiin?